हाम्रो छिमेकीले हामीलाई हल्लाएको होइन, हामी आफैं हल्लिएका हौँ : डा. भेषबहादुर थापा – Janamukhi.com
'चरित्र र व्यवहारको कमी कमजोरीले गर्दा राष्ट्र नै लज्जित हुनुपरेको स्थिति पनि आएको छ'
जनमुखी संबाददाता १० श्रावण २०७६, शुक्रबार
कूटनीतिका गहिरो जानकार, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राजदूत डा. भेषबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी
नेपालको परराष्ट्र नीतिले पक्रेको दिशा कस्तो छ ? के यो सही ढङ्गले हिँडिरहेको छ ?
नेपालमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा धेरै हेरफेर पनि भए । गएको ५० वर्षको लामो अवधिमा भिन्न राजनीतिक अवस्थामा पनि कुनै न कुनै अनुभव प्राप्त भए । त्यस आधारमा लेखाजोखा गर्दा आफ्नो भूगोल र नेपालको इतिहासको आधारमा राणाकालभन्दा अगाडि वा बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपालले लुकेर अस्तित्व जोगाएको हो । विश्व मानचित्रमा अग्रसर नभएर देखा नपरेर, कसैको आँखा नपरोस् भन्ने धारणा राखेर नेपालले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाए । तर विकासको सवालमा सहभागी हुन सकेन ।
नेपाल विश्वको मानचित्रमा देखापरेको सन् १९५५ को बाङ्डुङ सम्मेलनपछि मात्र हो । त्यो सम्मेलनभन्दा अगाडि नेपाल चीनमा जाने र भारत जाने, ब्रिटिस साम्राज्यसँग सहबास गर्नेमा मात्रै हाम्रो ध्यान केन्द्रित थियो । बाङ्डुङमा गएर विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएर, सक्रिय भूमिका नेपालले खेलेर आफूलाई विश्वको पर्दामा पनि देखापार्यो । त्यहाँ प्रतिपादित सिद्धान्तहरू; तटस्थता, हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने, आफ्नो सार्वभौमिक सत्ताप्रति अडिग रहनेदेखि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तका आधारमा निर्माण भएका नीति, संवाद र संरचना अङ्गीकार गर्यो । निरङ्कुश राणाशासन काल, राजाको शासनकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै अहिले भएको व्यवस्थासम्म आइपुग्दा सबैसँग मित्रता र सहअस्तित्वको आधारमा, खास गरेर असंलग्नताका सिद्धान्तहरूलाई मूलमन्त्र मानेर नै त्यसपछिका संविधानहरू निर्माण भयो, विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन भयो
बीचबीचमा केही उतारचढाव र उच्छृङ्खलपना नआएको होइन । कसैसँग सामीप्यको भावना अभिवृद्धि गर्ने, कसैसँग समदूरीभन्दा टाढै रहनेजस्ता विसङ्गतिहरू बीचबीचमा नदेखिएको पनि होइन । नीति निर्माणको तहमा, चाहे संविधानमा होस्, या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र र मानव अधिकारको तहमा सहभागी हुने कुरामा होस्, केही तलमाथि भए पनि निरन्तरता चाहिँ पाएको छ ।
सैद्धान्तिक विषयमा निरन्तरता त आए तर व्यवहारमा कहिले कसैको, कहिले कसैको निकट जाने तदर्थवादी व्यवहार पनि देखियो नि, हैन र ?
त्यो नीतिको परिवर्तनबाट भएको होइन । नेपालमा भएका सङ्घर्ष र परिवर्तनहरू, कहिले प्रजातन्त्र, साम्यवादका लागि भएका सङ्घर्ष, राजाले गरेका कू लगायतका घटनामा त्यस्ता भए । त्यो कहिलेकाहीँ सहभागिता र सद्भावना खोज्नका लागि, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि, आफ्नो भूमि छोडेर पनि बाहिर गएर सङ्घर्ष गरेको विश्वव्यापी रूपमा पनि भएको छ । त्यो कुरा हामीमा पनि नभएको होइन ।
मेरो मुख्य भनाइ के हो भने व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आए पनि विदेश नीतिको मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिपादनमा सबैले एकरूपता देखाएका छन् । कार्यान्वयनका बेलामा कसैको कसैप्रति पार्टीगत, समूहगत झुकाव भए होलान् । झुकाव, सोचाइ र काम गराइमा केही परिवर्तन नभएको होइन तर त्यो क्षणिक रह्यो । तटस्थता, सार्वभौमिकता र त्यसपछि प्रगतिमा सहभागी हुने कुराले निरन्तरता पायो । द्विपक्षीय या बहुपक्षीय्, ती सबैकुरामा सानै देश भएपनि बाङ्डुङपछि नेपालले सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।
बाङ्डुङ सम्मेलनभन्दा पछाडि फर्केर जाने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा आधुनिक नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण साहसम्म पुग्न सकिन्छ, जसले मुलुकलाई एउटा असंलग्नकै अवस्थामा राख्नुभएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो परराष्ट्र नीति एक किसिमले ब्रिटिसहरूको छत्रछायाँमा गयो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा आएपछि असंलग्नातिर लाग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि सिद्धान्ततः निरन्तरता र एकरूपता रहे पनि व्यवहारमा उतारचढाप आएको देखिन्छ ? यी समग्र स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको दृष्टिकोणले कुन अवस्थालाई राम्रो वा अब्बल मान्न सकिन्छ ?
तपाईं इतिहासको सुरुमै जानुभयो । पृथ्यीनारायण शाहको दिव्योपदेश र बाङ्डुङ सम्मेलनको घोषणालाई हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई सार्वभौमिक, सबल तथा सक्षम बनाउन विदेश नीतिमा आफ्नो कुरामा मात्र होइन, अरूका कुराले पनि प्रभाव पार्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । विश्वयुद्धपछि त्यो बेलामा नासेर, नेहरू, एनक्रुमा, सुकार्नो जस्ता विश्व राजनेताहरूको हाराहारीमा हाम्रो राजा पनि देखापरे । त्यो बेलामा बौद्धिक जगतले पनि राजालाई साथ दिएको हो ।
छिमेकी देशले हामीलाई आफ्नो छायाँमुनि रहोस् भन्ने धारणाले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गरेर आएको स्थितिबीच अप्रत्यासित रूपमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको र त्यसपछि आएर बाङ्डुङ सम्मेलमा सहभागी भएको स्थिति हो । म चाहिँ यो समयलाई नेपालको विदेश नीतिको ढोका खोलेको अवस्थाको रूपमा हेर्छु । त्यसपछि धेरै कुरामा निरन्तरता आएको छ । व्यवहारमा केही तलमाथि भए होलान् । कसैको उत्तर वा दक्षिणसँग, साम्राज्यसँग निकटता र झुकाव भए होलान् तर तिनले राष्ट्रको अस्तित्वमा नै चाहिँ प्रभाव पारेको छैन ।
तर त्यो खालको स्थितिले प्रभाव पार्ने सम्भावना वा खतरा पछिल्लो चरणमा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक तहमा वैचारिक वा सैद्धान्तिक हिसाबले देखिएको विविधताले बीचबीचमा उतारचढाव देखियो । आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि क्षणिक रूपमा भए पनि कसैको समर्थन लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर पनि भएको छ । बीचबीचमा कुनै समूहको होस् या मौलिक सोचाइको अभावले होला, कहिले नजिक देखिने, कहिले टाढा देखिने कुनै विषयमा भिन्नता नदेखिएका होइनन् । तर, म फेरि त्यही कुरामा आउँछु ः आमूल रूपमा झुकाव देखिएको क्षणिक होला तर दीर्घकालीन भएको छैन ।
नेपालले लिएको अहिले लिएको विदेश नीति सन्तुलित नरहेको र यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि सुनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? कस्तो बनाउनुपर्छ ?
नीति भनेको कुनै व्यक्ति वा समूहको सोचाइ होइन, यसमा समग्र राष्ट्रको सोचाइको प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ । त्यो हिसाबबाट छुटफूट हिसाबबाट आवाज आए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, प्रगतिमा सहभागी हुने, मानवीय पक्षलाई अङ्गीकार गर्ने, अमानवीय कुरामा साथ नदिने जस्ता सोचाइमा नेपालको निरन्तररता रहेको छ ।
द्वन्द्वका बेलामा, खास गरेर जनयुद्धका बेलामा जेजति कुरा भए अब अहिले आएर आयोग र विभिन्न माध्यमबाट त्यो विषयको कुराको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । प्रायश्चित गर्नका लागि होइन, भविष्यमा यस प्रकारका कुरा नहोऊन् भनेर जोगिनका लागि विश्वव्यापी समर्थन पनि छ । हाम्रो यहाँ पनि आंशिक रूपमा सोचाइ छ । तर, त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन किनकि राष्ट्रव्यापी द्वन्द्व हल हुुनु भनेको त ठूलो सङ्कटबाट हामी पार भएका हौँ नि ।
मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएको छ, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, संविधाअन्तर्गत विभिन्न तहका निर्वाचन भए, अहिले स्थिर सरकार बनेको छ । यो अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र मामिलाको सन्दर्भमा लिनुपर्ने खास बाटो वा गति कस्तो हुुनुपर्छ ? अबको परिस्थितिमा ठोस रूपमा कस्तो नीति बन्नुपर्छ जुन अबिचलित ढङ्गले अगाढि बढोस् । त्यस्तो खालको समग्र परराष्ट्र नीति बनेको छ कि छैन नेपालमा ?
नीति नबनेको होइन, नीतिको अभाव होइन । बीचबीचमा देखिएका विसङ्गतिका सङ्केतहरूको आधार राष्ट्रव्यापी होइन । त्यो समूहव्यापी वा कुनै सोचाइमा आधारित होला, शक्तिशाली भएको समयमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका होलान् । तर आधारभूत तहमा राष्ट्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा तथा सार्वभौमिक सर्वोच्चताको कुरामा परिवर्तन आएको छैन । हिजो बाहिर बसेर प्रतिकार गरेका तिनै व्यक्ति सत्तामा आउने बित्तिकै त्यही गोरेटोमा हिँड्नु पर्यो नि । बीचबीचमा परिस्थितिले ल्याएको विकृति र विसङ्गति होला, सोचाइमा भएको भिन्नताले ल्याएको होला ।
तर सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा आउँदा निकट छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, एउटाको मूल्यसँग अर्कोसँग खेलबाड नगर्ने, विश्वका शक्ति केन्द्रसँग सौहार्दपूण तवरले सहयोग लिएर प्रगतिमा सहभागी हुने जस्ता कुरामा मूलभूतरूपमा परिवर्तन आएको त छैन नि ! त्यसैले क्षणिक वा बीचमा भएको विसङ्गतिलाई हेरेर सम्पूर्ण कूरामा परिर्वन आएको सङ्केतको रूपमा यसलाई हेर्नु हुँदैन ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा जति नै ठूला कुरा गरे पनि ठोक्किने भनेको त भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै हो नि ? विदेशी नीति कस्तो रहने भन्ने त यसैबाट निर्णय हुन्छ, होइन र ?
राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालले धेरै फड्को मारेको छ । सुरुमा मैले भने नि बाउबाजेका पालामा अङ्ग्रेज बहादुर भन्थे, अङ्ग्रेजका राजदूत त्यतिबेलाको रेजिडेन्ट भन्ने एउटा कप्तान हुन्थ्यो । यता हाम्रा श्री ३ महाराज हुन्थे । त्यो बेलामा एउटा कप्तानलाई राजाले श्रीपेच लगाएर गद्दी बैठकमा भेट्नु पथ्र्यो । त्यो बेलामा जनचेतना नभएको हुनाले अहिलेको स्थितिमा तालमेल नखाने खालको भेटघाट हुन्थ्यो । अहिले त सञ्चार जगत पनि कराउँछ, बाँकी बौद्धिक समुदाय पनि कराउँछ । यो परिवर्तन भएको सैद्धान्तिक र वैचारिक प्रगतिले हो । विश्वले अङ्गीकार गरेको मूल्यमान्यताबाट टाढा छैनौँ, त्यसैभित्र छौँ हामीहरू ।
त्यसले गर्दा कहिले कहिले हामीले आफैंले आफैंलाई मूल्याङ्कन गर्दा आफ्ना कमजोरीलाई बाहिर ल्याएर बाँकी विश्वका अगाडि कमजोर देखाउने प्रवृत्ति नदेखिएका होइनन् । तर प्रतिपक्ष भयो वा जनसमर्थन पाएन भन्दैमा राष्ट्रको हितको विपरीत काम त कसैले पनि गर्नुभएन ।
नेपालको हकमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा निकै महत्त्व राख्छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध समदूरीका आधारमा तय हुनुपर्छ भनेर एकाथरि कुरा गर्छ भने अर्काथरि चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले गर्दा दक्षिणतिर नै विशेष सम्बन्ध रहने गर्छ भन्ने गर्छन् । वास्तवमै भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?
सम्बन्ध विचारमा मात्र होइन, भौगोलिकदेखि लिएर विभिन्न कुरामा आधारित हुन्छ । २०१७ सालको परिवर्तनपछि चीनसँगको सम्बन्ध र त्योभन्दा पनि अगाडि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि, हाम्रो यहाँको राजनीतिक परिवर्तनमा कुनै न कुनै प्रकारबाट लुकीछिपी होस् या प्रत्यक्षरूपमा होस् भारतका बुद्धिजीवीदेखि लिएर भारत सरकारले भूमिका नखेलेको होइन । त्यो हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनपछि जुन संरचना बन्यो, त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीले चीनसँग असल सम्बन्ध राख्नका लागि चीन गएर संवादको सुरुआत भयो । त्यसपछि पनि राजा महेन्द्रले कोदारीको बाटो बनाउने संरचना गरे ।
अन्त्यमा तपाईंको केही भन्नु छ कि ?
मेरो केही भन्नु छैन । अवकाशको जिन्दगी । ८४ वर्षको उमेर भइसक्यो । राणाकालमा जन्मिएको व्यक्ति म, अहिलेसम्मको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका प्रक्रियाहरूलाई देख्ने, भोग्ने र सहभागी हुने जुन मौका पाएँ, त्यो नै मेरा लागि अमूल्य सम्पत्ति हो । त्यसका लागि नेपाली जनताप्रति म अनन्त आभारी छु ।
रातो पाटिबाट साभार गरिएको कुराकानी
अब के निर्मलाको लागि न्याय मरेकै हो त नेपालमा ?
तनावग्रस्त बन्यो बिराटनगरको रानी,२२ वटा मालबहाक सवारी साधन भए तोडफोड